October 3, 2019 - Myitter
မိုးကျရွှေကိုယ်တင် မဟုတ်ဘူး ကတော်တွေပါ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့် နေပါပြီ
October 3, 2019 Myitter 0
ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူးကြီးရွှေသန်း(မိုးကျ)ကတော် ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် ရဲဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦး၏ ဇနီးအား လက်သီးစွမ်း ပြခဲ့သည့်အတွက် မျက်နှာတွင် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့မှုဖြစ်စဉ် အား ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးနှင့်ရဲချုပ်သိရှိနိုင်ရေးအတွက် တင်ပြခြင်း(၅၃) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ နေ့အခမ်း အနား ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်းအတွင်း ယနေ – […]
အသက် (၁၂၅) နှစ်ရှိ အဘိုးအား မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အသက်အကြီးဆုံးအဖြစ် အထူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အသက်အကြီးဆုံး အဘိုးအဖြစ် အသက် ၁၂၅ နှစ်ရှိ အဘိုးဦးကိုကိုကြီးအား အထူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည် ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်ကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရထားသော အသက် ၁၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အဘိုးဦးကိုကိုကြီးသည် တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ ဖရဲငွေတောင်လမ်းတွင် စောင့်ရှောက်ထားသော တူမမိသားစုဖြင့် […]
ယူနီကုဒ်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကို ဒီလိုအုပ်စုခွဲလို့ ရပါတယ်…
အုပ်စု (၁) ဖောင့်နေရာမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်တစ်ခုခု ပြောင်းလိုက်ရုံ ဒါမှမဟုတ် မူလပါပြီးသား default ကို ထားလိုက်ရုံ၊ language နေရာမှာ ရွေးလိုက်ရုံနဲ့ ယူနီကုဒ်ဖြစ်သွားတာ။ ဥပမာ Mi ဖုန်းတွေ။ အုပ်စု (၂) အုပ်စု ၁ လိုပဲ ပြောင်းရလွယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်ခုလုံးက […]
မုံရွာ _ မန္တလေး ကားဆရာတွေနဲ့ ဒရိုက်ဘာတွေကို ပညာပေးလိုက်တဲ့ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ
ကဲ! ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ မြစ်ကြီးနားကနေမုံရွာ _ မန္တလေးဘက် ခရီးသွားစရာရှိ၍ကားလက်မှတ် ဖြတ်ထားခဲ့သည်။တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လား မပြောတတ်ဆရာတော်ခရီးသွားတိုင်း ရှေ့ဆုံးခုံတန်း မရတတ်။ တစ်ဆယ်နောက်က ထိုင်ခုံနံပါတ်သာ ရလေ့ရှိသည်။ ဒါကိုဆရာတော်မကျေနပ်ချင်။သံယာခုံလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှေ့ခန်းတန်းမှာ အမျိုးသမီးငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ ထိုင်နေပြီးမိမိက တစ်ဆယ်နောက်မှာ ထိုင်ရလေ့ရှိတာလည်း သတိထားမိသည်သာ…လမ်းက စောင့်စီးမည်ဟု ကြိုတင်မှာကြားထားသဖြင့်ကားလာချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေလိုက်သည်။ မိနစ် […]
ရှင်ပြုနားသအလှူအတွက် အဖြုန်းစာရင်း” ဆိုင်း ၃၅-သိန်း ဘိသိက် ၁၀- သိန်း မဏ္ဍပ်စင် ၁၀-သိန်း မြင်းငှားခ ၄-သိန်း (တစ်ကောင် ၂-သောင်း/အကောင် ၂၀ စာ) မိတ်ကပ်ဖိုး ၁-သိန်း(နာမည်ကြီးဆို ၁၀-သိန်းထိဈေးပေါက်) ဓာတ်ပုံဗီဒီယို ၂-သိန်း ရှင်လောင်းလှည့် ၅-သိန်း ဝတ်စုံ ၃-သိန်း အရက်ဖိုး […]
မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ တာဝန်ကျရာ မြို့မှ အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာသော အခါ သူ့ယောက်ျားကို ” ရှင့် အိမ်ဖော်ကလည်း ချောလှချည်လား ကိုမိုးကြီးရဲ့ ” ” ချောလား မချောလား မသိပါဘူးကွာအဝတ်လျှော် ထမင်း ချက်တတ်ရင် ပြီးတာဘဲ ဆိုပြီး ခေါ်ထားလိုက် […]
ပရိသတတြှေ ခစွကြှတဲ့ သရုပဆြောငြ၊ အဆိုတြော မငြးသှေး ကှယလြှနသြှားတာ ဒီနဆေို့ရငြ (၁)နှစတြိတိ ပှညြ့ပှီ ဖှစပြါတယြ။ မငြးသှေး ကှယလြှနသြှားတာ တစနြှစရြှိပှီဆိုပမယြေ့ သူ့ကို ခစွကြှတဲ့ မိသားစု၊ မိတဆြှသေူငယခြငြွးတှနေဲ့ ပရိသတတြှကတေော့ ဒီနဒေီ့အခွိနထြိ မလေို့ရဦးမယြ မထငပြါဘူး။ မိသားစုတှေ၊ မိတဆြှသေူငယခြငြွးတှကေ မငြးသှေး ကှယလြှနပြှီးကတညြးက […]
ကုသိုလ်​ကံ မြင့်​မာ ​စေဖို့ မိမိ ဘဝမှာ ကုသိုလ်​ကံ​တွေ တိုးသထက်​ တိုးလာပါ က မိမိ လုပ်​တိုင်း ကိုင်​တိုင်​ ကြံစည်​တိုင်​ ​အောင်​မြင် ​နေပါလိမ့်​မယ်​ ​တော်တော်​ များများ ဒုက္ခ​ရောက်​ရတာ ကုသိုလ်​ကံ အ​ကြောင်းတရား ​တွေ နည်းသွား ကာအာကုသိုလ်​ ကံ​တွေ ဝင်​လာတဲ့အခါ […]
တချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့််ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရသူပါနော်. (၁) ငှက်မွှေးလေးကျလာတယ် တကယ်လိုိ့သင့်အနားလေးမှာ […]
လူတွေသက်တမ်းစေ့မနေရအောင်အများဆုံးသတ်နေတဲ့အရာက နှလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံး ရုတ်တရက် ရပ်မသွားအောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ရက်ကိုမိနစ်ဝက် ၃ ကြိမ်နဲ့ နာရီဝက် ၃ ကြိမ်အချိန်ပေးရပါမယ်။ ” မိနစ်ဝက် ၃ ကြိမ် ” ၁။မနက်အိပ်ယာ စနိုးတဲ့အခါ ချက်ချင်း မထပါနဲ့မိနစ်ဝက် ဆက်လှဲနေပါ။ ၂။မိနစ်ဝက်လှဲပြီးလျင် မိနစ်ဝက် ထိုင်နေပါ။ […]